Oromo News 05.20.21 | KWIT
Oromo News 05.20.21
By Fatiya Adam • May 20, 2021
Oromo News 05/20/2021
Akka ganama kanaati barattooni, barsiisoni fi biro keessa warri hojattan kan Sioux City Community School akka biyyati guututi dirqama haguugi fuula godhachuun akka hin jirre himan. Murtiin kun kan fudhatame seera baasostota Iowa ttiin eda galgala seati dhuma irrati kan murteesaniidha. Ganama kana jalqaba irrati, Governor Iowa Kim Reynolds godhaani haguugin fuula mana barumsaa keessati dirqama akka hin taanne mallateesite jirti.
Seera baastonni Republica haasawa yeroo dheera eega godhan booda seera baastonni Iowa yeroo hin eegamanitiit walgahii torbaan sadii booda geesani cuafanii jiru.
Seera baasan jijjiirami tax irrrati seera jijjiira baasudhan haala sagalee kennuu hir’isuu qawwee qabachuu baayisu fi haguugi fuula godhachuu iraati seera jajjabinaa baase jira.
State Siouxland Sadiin dabalatee bakkeewan 10 tti bakka western state bakka naannawa baadiyaati seera qorannoo amma baheen kaqaraa iraa kan gudatte eega bahe booda jia lama booda galmeen haaroyni mul’atee jira. Wayta May qorannoo baadiyaa Mainstreet irrati godhame 78.8 gahee jira, kunis kan qaraa caala point 7 irra olgudatee jira. Wanni kamuu 50% ol yoo kan taruu gudachuu Economy kan mullisuudha.
Ganama kana Boxes nyaata 1,000 ol ta’uu garee qonnaan families Food Box Program irraa kenname jira. Yaalin isaan godhan bakka Community Action Agency fi hope center qopheesudhaayu. Kan biraa kan drive-thru dhaan kennamu kamsaa itti aanu seati 10 a.m bakka parki Sunnybrook Church kan Morningside olla jiru kan kennamu akka tae himani jiru.